Ụlọ ọrụ ngwaahịa | Ndị na -emepụta ngwaahịa China, ndị na -ebubata ya
Akpa ekwentị FAUCI (ikuku ikuku pụrụ iche ...
FAUCI Deodorizer friji na freshener
Onye na -ekpocha ikuku ụgbọ elu FAUCI (ihe nchacha ikuku pụrụ iche)
FAUCI Cube Disinfection Cube (ihe nchacha ikuku pụrụ iche)
Igwe nchacha ikuku nke FAUCI
Robot nke na -emebi ikuku nke FAUCI
Akpa ekwentị FAUCI (ihe nhicha ikuku pụrụ iche)
(Nke anyị puru iche AAPG nwere sanitizer ikuku dị n'ime ya)
Ihe FAUCI AAPG (nke dị na FAUCI Air Disinfection Phone Case) nke ejiri teknụzụ anyị nwere, nwere ike wepụta ihe ndị na -egbu egbu ọ bụghị naanị na ekwentị, kamakwa n'ime ikuku gbara ya gburugburu, iji kpochapụ nje na nje na -emerụ ahụ ngwa ngwa dị ka nje influenza. formaldehyde, wdg.
Ọ nweghị ihe na-emerụ ahụ mmadụ dịka ọ na-egosi site na nnwale SGS a ma ama site na ọkọlọtọ FDA. N'ihi nke a, ọ na-enyere aka igbochi nnyefe ikuku nke nje na nje nke bụ isi ihe kpatara mgbasa COVID-19.
Akpa ekwentị pụrụ iche nke ikuku ikuku anyị nwere ike ọ bụghị naanị ichedo ekwentị gị, kamakwa ahụike gị, ọkachasị n'oge ọrịa na oge ọrịa COVID-19 a.
FAUCI Car Air Disinfector, nke nwere ihe FAUCI AAPG nke anyị mepụtara nke ọma, nwere ike wepụta ihe na -emebi ikuku, na -ewepụ ngwa ngwa nje ndị dị ka nje influenza, formaldehyde, wdg.
Ọ nweghị ihe na-emerụ ahụ mmadụ dịka ọ na-egosi site na nnwale SGS a ma ama site na ọkọlọtọ FDA. N'ihi ya, ọ na-enyere aka igbochi nnyefe ikuku nke nje na nje nke bụ isi ihe na-agbasa mgbasa nke COVID-19.
Ezubere igwe nhicha ụgbọ ala anyị maka ndị ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọ ala Uber nke ọrụ ha na -ekpughere ha n'ihe ize ndụ nke nnyefe ikuku nke nje n'ime oghere pere mpe nke emechiri emechi nke ndị njem butere n'oge oge flu na ọrịa a.
FAUCI Air Disinfection Cube, nke nwere ihe FAUCI AAPG mepụtara n'aka anyị, nwere ike ịtọhapụ ihe ndị na -emebi ikuku, na -ewepụ ngwa ngwa nje ndị dị ka nje influenza, formaldehyde, wdg.
Ọ nweghị ihe na-emerụ ahụ mmadụ dịka ọ na-egosi site na nnwale SGS a ma ama site na ọkọlọtọ FDA. N'ihi ya, ọ na-enyere aka igbochi nnyefe ikuku nke nje na nje nke bụ isi ihe kpatara mgbasa nke COVID-19.
Emebere Cube anyị maka ndị na -eme njem site n'ụgbọ njem ọha, ọkachasị site n'ụgbọ elu ma ọ bụ na njem ụgbọ mmiri n'oge oge ọrịa na ọrịa a na -echegbu onwe ya maka nnyefe ikuku nke nje n'ime oghere nwere oghere. Ọ na -arụ ọrụ dị ka onye na -ehicha ikuku nke obere ikuku na -enye ikuku dị ọcha maka ihe dịka mita 3 square.
FAUCI friji deodorizer & freshener bụ ngwaahịa pụrụiche pụrụ iche ejiri mee ihe na friji iji kwalite nchekwa nri na iwepu isi na -emebi emebi.
Mgbe ị mepere ma tinye ya na friji ruo awa ole na ole, ị ga -ahụ nke ọma na isi adịghị mma nke isi ọ bụla dị na friji apụọla kpamkpam. N'otu oge ahụ, ị ​​ga -achọpụta mgbe e mesịrị, nri na -adị ọhụrụ ruo ogologo oge.
Ndị ụlọ nyocha nnwale nyere akwụkwọ ikike-ọ dị mma, anaghị egbu egbu ma ọ naghị emebi emebi. N'otu oge ahụ, ọ naghị emepụta ozone ọ bụla, yabụ, ọ dị mma na gburugburu ebe obibi.
Igwe ihe nchacha ikuku FAUCI nwere ihe pụrụ iche nke ihe na -egbu ikuku ikuku FAUCI AAPG Ihe anyị mepụtara nke ọma. Ihe ahụ nwere ike wepụta ihe na -egbu egbu, na -ewepụ ngwa ngwa nje ndị dị ka nje H1N1, nje influenza, formaldehyde, wdg.
Ọ nweghị ihe na-emerụ ahụ mmadụ dịka ọ na-egosi site na nnwale SGS a ma ama site na ọkọlọtọ FDA. N'ihi ya, ọ na -enyere aka igbochi nnyefe ikuku nke nje na nje. Igwe nchacha ikuku anyị na -ekwupụta nchegbu ndị mmadụ gbasara mbufe nje nke ikuku n'oge oge flu na ọrịa a.
Robot nke na -ekuku ikuku FAUCI, nke na -ejikọnchacha ala, ọrụ nsị uzuzu yana nsachapụ na ọrụ nhicha ikuku, bụ nke mbụ n'ụdị ya. Emebere ya maka nnukwu ụlọ ime ụlọ dị ka nnukwu ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ebe a na -eme oriri na nkwari, wdg. Ihe ndị na -egbu ikuku na -enwe ike iwepụta ihe, na -ewepụ ngwa ngwa nje ndị dị ka nje influenza, formaldehyde, wdg n'ime ikuku.
Ọ nweghị ihe na-emerụ ahụ mmadụ dịka ọ na-egosi site na nnwale SGS a ma ama site na ọkọlọtọ FDA. N'ihi ya, Robot na-enyere aka igbochi nnyefe ikuku nke nje na nje nke bụ isi ihe kpatara mgbasa nke COVID-19. Ugbu a, Robot anyị na -enye onyinye nke ya n'ọgụ mgbake azụmaahịa site na ọrịa a zuru ụwa ọnụ.